Naseho ireo telefaona 49 Huawei sy Honor izay hanana EMUI 9.1 | Androidsis
Ny antsipiriany voalohany momba ny EMUI 9.1 dia naseho vao tsy ela akory izay. Ity no kinova vaovao an'ny sosona fanaingoana ho an'ny telefaona Huawei sy Honor. Kapa izay mitondra andian-dahatsoratra vaovao sy izay beta efa natomboka tamin'ny telefaona sasany. Na dia mistery aza ny lisitr'ireo finday feno izay hiditra amin'ny fanavaozana. Soa ihany fa efa nizara ity lisitra ity ny orinasa.
49 ny totalin'ny finday misy eo anelanelan'ny Huawei sy Honor. Ka toa ny lisitry ny finday voafaritra io no hanana an'ity fanavaozana ity amin'ny EMUI 9.1 amin'ny fomba ofisialy. Ny mbola tsy nomena amin'izao fotoana izao dia daty hanaovana fanavaozana. Na dia amin'ny modely sasany aza dia efa natomboka izy io.
Be dia be ny lisitra. Ho fanampin'izay, misy telefaona misy ny marika mbola tsy natomboka na handeha any Eropa. Ka misy kely ny zava-drehetra ao anatiny. Tadidio fa amin'ity tranga ity, ny fanavaozana ny EMUI 9.1 dia tsy miankina amin'ny Android. Ka tsy mila manana Android Pie ianao raha manana an'ity kinova ity.
Ny lisitr'ireo finday avo lenta an'ny Huawei sy Honor izay hiditra amin'ny EMUI 9.1, araka ny nanamafisan'ny orinasa azy ihany, dia toy izao:
Hajao ny 10
Huawei Nova faha-4
Huawei Nova faha-3
Huawei mankafy 9 Plus
Huawei mankafy 8 Plus
Huawei Ankafizo MAX
Huawei Mankafy ny 9S
Huawei Mankafy ny 7S
Huawei Ankafizo faha-9
Hajao 8X Max
Huawei MediaPad M5 (amin'ny endriny misy 10,8, 10,1 ary 8 santimetatra)
Azontsika jerena ankoatry ny finday avo lenta manana takelaka ao amin'ity lisitra ity koa izahay. Noho izany dia hanana fidirana amin'ny EMUI 9.1 ihany koa ilay takelaka. Ireo finday voalohany ao anaty lisitra dia efa nahazo fidirana amin'ny beta, araka ny voalaza. Tadidio koa fa ity kinova ity miaraka amin'ny GPU Turbo nohatsaraina.
Hisy ny fanavaozana mandritra ny volana vitsivitsy. Tsy nisy daty nomena, satria zavatra miankina amin'ny telefaona tsirairay izany. Fa ao anatin'ny volana vitsivitsy dia tokony hitranga amin'ny fomba ofisialy izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Huawei » Nanambara ny lisitry ny telefaona izay hanavao ny EMUI 9.1
Xiaomi dia hanokatra fivarotana 5.000 XNUMX any India ao anatin'ny herintaona
Xiaomi dia manamafy ny famolavolana ny Redmi S3 amin'ny horonan-tsary